Shirka kooxda xiriirka Soomaaliya ee Ururka Iskaashiga Islaamka oo ka furmay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaShirka kooxda xiriirka Soomaaliya ee Ururka Iskaashiga Islaamka oo ka furmay Muqdisho
October 27, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Shirka kooxda xiriirka Soomaaliya ee Ururka Iskaashiga Islaamka oo ka furmay Muqdisho. [Isha Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shirka kooxda xiriirka Soomaaliya ee Ururka Iskaashiga Islaamka ayaa maanta oo Sabti ah ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Masuuliyiin ka kala timid wadamo badan oo katirsan Ururka Iskaashiga Islaamka ayaa ka qeybgalaya shirka, oo la filayo in uu socdo hal maalin.
Shirka ayaa diirada lagu saarayaa sidii loo caawin lahaa Soomaaliya iyada oo dalku uu ka soo kabanayo muddo badan oo burbur iyo xasilooni daro ah.
London-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda Ciraaq ayaa sii wada howlgaladooda ku wajahan galbeedka magaalada Mowsil, oo ah meeshii ugu dambaysay ee ay kooxda ISIS ka joogaan gudaha dalka Ciraaq. Dhanka bari ee magaalada ayaa laga xoreeyay [...]